हियरिङ एड्स आपूर्तिकर्ता | हियरिङ एड्स आपूर्तिकर्ता
चीनबाट सर्वश्रेष्ठ श्रवण सहायता आपूर्तिकर्ता खोज्दै हुनुहुन्छ
कोटी छनौट गर्नुहोस्
सस्तो सुनुवाई एड्स
2011 मा स्थापित
उत्तम दर्जा दिइएको
इच्छा सूचीमा थपियोइच्छा सूचीबाट हटाईयो 1
JH-A32B ताररहित TWS डिजाइन डिजिटल रिचार्जेबल कान पत्ता लगाउने श्रवण एड्स
कान पत्ता लगाउन JH-A620 प्रतिक्रिया नोब भोल्युम नियन्त्रण मिनी रिचार्जेबल ITE श्रवण एड्स बाट बच्न
Jh-W3 सर्वश्रेष्ठ रिचार्जेबल ब्लुटुथ श्रवण सहायता स्ट्रिम संगीत र फोन कल स्व-फिटिंग APP 2022
JH-D58 सुपर पावर रिचार्जेबल डिजिटल BTE सुनुवाई एड्स
JH-D31 मिनी BTE सुनुवाई एड्स
JH-A39 रिचार्जेबल ITE सुनवाई एड सेतो
OTC श्रवण यन्त्रहरू खोज्दै
नवीनतम उत्पादनहरू जाँच गर्नुहोस्
YouTube मा हामीलाई पछ्याउनुहोस्
अलीबाबा कारखाना अडिट भिडियो
हाम्रो खुशी ग्राहकको समीक्षा
अरूले हाम्रो बारेमा के सोच्छन् जाँच गर्नुहोस्
सबै भन्दा पहिले, यो धेरै छिटो छ! यसले मेरो हजुरबुबा बनायो र म खुशी! मेरो हजुरबुबाले यो लगाए पछि, उनले भने कि उनको कान धेरै सहज छ र कानहरुमा चोट पुर्याउने छैन जति पहिले सुन्ने ऐस जस्ता। दोस्रो, यससँग तीन मोडहरू छन्: सामान्य मोड, शोर मोड र टेलिफोन मोड। अपरेशन धेरै सरल छ। मेरो हजुरबुबाले यो धेरै चाँडै सिक्नुभयो! यो श्रवण सहायता वास्तवमै सुविधाजनक छ र मेरो हजुरबुबालाई धेरै खुशी पार्दछ! १०० डलर भन्दा बढीको मूल्यको लागि, हजुरबुबाको खुशी मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो! यो उत्तम उत्पादन हो!
यो एक परिवारको सदस्यको लागि किन्नुहोस् जसलाई डाक्टरले तोकेको एकले राम्रोसँग काम नगरेको र ब्याट्रीहरू धेरै छिटो (धेरै महँगो) पछि सुन्न गाह्रो हुन्छ। सुरुमा तिनीहरूसँग लगातार बज संग ठूलो समस्या थियो। मैले मेरो चिन्ता व्यक्त गर्दै कम्पनी Jinghao लाई सम्पर्क गरें र समस्या निवारण गर्न मद्दत गर्ने निर्देशनहरूको साथ प्रतिक्रिया दिइयो र तिनीहरूले तुरुन्तै काम गरे! इयरपीस राम्रोसँग फिट हुन आवश्यक थियो त्यसैले मैले यसलाई ठूलो सिलिकॉन इयर टोपीसँग फिट गरें। इयरपीस स्थापना नभएसम्म अन नगर्नुहोस्। इयरपीसको नजिक सुन्न बटनहरू खोल्दा स्थापना गरेपछि म अन गरिएको बीपहरू सुन्न सक्षम छु। इयरपीसको नजिक हात उठाउँदा इयरपीस बज हुन सक्छ त्यसैले यसलाई सजिलै बेवास्ता गर्न सकिन्छ।
मलाई साँच्चै यी आकार मनपर्छ। मेरा अरूहरू जुन मैले प्रत्येक कानको लागि तिर्नुपर्ने थियो धेरै ठूला थिए र तिनीहरू यति चाँडै भाँचिए तर म अझै पनि तिनीहरूलाई बटन बिना नै प्रयोग गर्न सक्छु। मैले उस्तै प्रकार पाउन थाले र त्यसपछि मैले यी याद गरें। मलाई मन पर्छ कि तपाईलाई केवल एउटा USB पोर्ट चाहिन्छ र दुई होइन।
हाम्रो उत्पादन गुणस्तर प्रमाणपत्र को एक श्रृंखला पारित गरेको छ।
Huizhou Jinghao मेडिकल टेक्नोलोजी कं, लि। चीनमा एकमात्र सूचीबद्ध श्रवण सहायता/श्रवण एम्पलीफायर निर्माता हो। यो R&D डिजाइन र उन्नत उत्कृष्ट JingHao ब्रान्ड डिजिटल श्रवण सहायता, OTC श्रवण सहायता, ब्लुटुथ श्रवण सहायता, श्रवण एम्पलीफायर र व्यक्तिगत ध्वनि एम्पलीफायर (PSAPs) श्रवण उपकरणहरू बेच्ने क्षेत्रहरूमा द्रुत रूपमा बढ्दो उत्पादक हो। प्रोफेशनल श्रवण सहायक उत्पादनहरू निर्माताको रूपमा, हाम्रो उच्च एकीकृत क्षमताहरूको उद्देश्य हाम्रा ग्राहकहरूलाई द्रुत प्रतिक्रिया, ठूलो मात्रा, उच्च गुणस्तर र OEM/ODM सेवा तर PCB डिजाइन, आवास मोल्डिङ र सफ्टवेयर अनुकूलन सहित कम लागतको सुनुवाइ समाधानहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य हो।
हाम्रो चिकित्सा उत्पादनहरू स्वीकृत भएको थियो CE/ROHS/ISO/FDA/PATENT को पत्र, आदि। र जस्तो कि विदेशी बजारसँग सहकार्य गर्न। हाम्रो कारखाना स्वीकृत भएको थियो आईएसओ 13485 र BSCI अब हामीसँग चीनमा धेरै शाखा कार्यालयहरू छन्, 2015 को शुरुआतमा भारतमा सफलतापूर्वक नयाँ कार्यालय खोल्नुहोस्।
तपाईं ट्रेडिंग कम्पनी वा निर्माता हुनुहुन्छ?
हामी कारखाना हौं। हामी 10 वर्ष भन्दा बढीको लागि विश्वव्यापी ग्राहकहरु को लागी OEM र निजी लेबल श्रवण एड्स प्रदान गर्दै आएका छौं। हामीसँग बाओन, शेन्जेनमा हाम्रो आफ्नै कारखाना छ, कुनै पनि समयमा हामीलाई भेट्न स्वागत छ।
के तपाईं नमूनाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ? यो सित्तैमा वा थप हो?
A: 1. होइन, हामीले नि: शुल्क शुल्कको लागि नमूना प्रस्ताव गर्न सकेनौं र भाडाको लागत तिर्न सक्दैनौं।
२. हामी तपाईंको नमूनाहरू वा प्राविधिक रेखाचित्रहरू द्वारा उत्पादन गर्न सक्छौं। हामी मोल्ड र फिक्स्चरहरू निर्माण गर्न सक्दछौं।
हामी सामान्य रूपमा DHL, UPS, FedEx वा TNT बाट जहाज गर्दछौं। यो आइपुग्न सामान्यतया -3- days दिन लाग्छ। एयरलाइन र समुद्री शिपिंग पनि वैकल्पिक।
के तपाइँसँग प्याटेन्ट डिजाइन संग कुनै उत्पादन छ?
धेरै जसो श्रवण यन्त्रहरू हाम्रो विशेष पेटेन्ट डिजाइनको साथ मौलिक हुन्। हामीले पेटेन्ट आवेदन दिएका छौं।
नवीनतम श्रवण सहायता समीक्षाहरू र श्रवण हेरचाह सुझावहरू जाँच गर्नुहोस्
कम्पनी समाचार र श्रवण एड्स उद्योग समाचार
बोस कम्पनी शटर स्वास्थ्य डिभिजनको रूपमा श्रवण सहायता बजारबाट बाहिर निस्कन्छन्
मे ३ मा बोस्टन ग्लोबको रिपोर्टले पुष्टी गर्‍यो कि महिनौंसम्म अफवाह फैलिरहेको छ...
सुन्ने हानि: वृद्ध वयस्कों को लागी एक सामान्य समस्या
आवाज, बुढ्यौली, रोग र वंशानुगत कारणले हुने सुन्ने समस्या एक सामान्य समस्या हो। मानिसहरु...
बच्चाहरु को लागि श्रवण एड्स
श्रवण यन्त्रहरूले सबै उमेरका बालबालिकाहरूमा धेरै प्रकारका श्रवण हानिमा मद्दत गर्न सक्छ। एक...
डेनमार्क आफ्नो कोभिड खोप कार्यक्रम रोक्ने पहिलो देश बनेको छ
मुख्य बुँदाहरू डेनमार्क आफ्नो कोविड रोक्न पहिलो देश बनेको छ ...